Accueil > Gazetin'ny nosy > Toamasina: Sakantsakanan’ny lehiben’ny faritra ny asa ataon’ny kaominina
Toamasina: Sakantsakanan’ny lehiben’ny faritra ny asa ataon’ny kaominina
Asa loatra izay mahazo ny mpitondra fanjakana ao Toamasina ao. Izay zavatra ataon’ny ben’ny tanàna Elysé Ratsikara dia ilain’ingahy Talata Michel sotasota avokoa. Ataon’ity lehiben’ny faritra ity andrimaso mihitsy ingahy ben’ny tanàna. Ny ben’ny tanàna izay avy amin’ny antoko Mapar na miaraka amin’i Rajoelina. Ny lehiben’ny faritra dia notendren’ny HVM izay antokon’ingahy Hery Rajaonarimampianina.
Hatramin’ny fihetsiketsehana ataon’ny vadin’ingahy Elysé Ratsiraka ramatoa Juliana avy no ilain’ingahy Talata Michel adrisa.
Ny faha valo martsa 2018 teo dia nizara roa ny fankalazana ny fetin’ny vehivavy tany Toamasina. Nisy ny natao tao Brikaville izay ivon’ny fankalazana. Ny tsy afaka nandeha tany amin’ity distrika ity dia nankalaza izany tao Toamasina ihany. Tezitra tamin’izany ingahy Talata Michel ka nosakanany ny fety notarihin’ny vadin’ny ben’ny tanàna. Vary be menaka nefa no natolotr’ity ramatoa ity ho an’ny vehivavy izay nijanona tao Toamasina. Mbola niaraka namafa sy nanadio teo anoloan’ny lapan’ny tanàna koa izy ireo ho marika ny fanamarihana izany. Izany ve dia tokony hampialona? Mampalahelo ny toe-tsainan’ny mpitondra ao Toamasina.